ukufudumeza ukufudumeza ngetambo yentsimbi ye-stainless nge-hematter ephezulu
Induction Ukushisa ubushushu yentsimbi yefowuni eyenziwe ngocingo oluhlanganisiweyo kunye nokungeniswa koxinzelelo loxinzelelo. Ukufudumeza kwenziwa ngelixa ikhebula lilinani ukumisa amandla afunekayo ukuze kuhlangatyezwane nomthamo wokudweliswa komthengi we-1,000 ft / iyure (305 m / hr).
I-DW-UHF-4.5KW i-heater ye-induction
• Intambo yentsimbi ye-Austenitic
• Uvavanyo loku-1 - Cable # 2024, OD: 0.025 ″ (0.64 mm)
• Uvavanyo loku-2 - Cable # 2019, OD: 0.018 ″ (0.46 mm)
Amandla: 4.03 kW
Ukufudumeza ngamandla i-5.5 ″ (14 cm) yentambo:
(a) Imizuzwana emi-3
(b) Imizuzwana emi-4
(c) Imizuzwana emi-7
Ukufudumeza ngamandla i-5.5 ″ (14cm) yekhebula:
(d) Imizuzwana emi-2
(e) 4.2 imizuzwana
(f) Imizuzwana eyi-8.8
Uvavanyo lobushushu oluqinileyo: ucingo lwagcinwa luzinzile kwindawo ebekiweyo, phantsi kwembambano, kwiikhoyili zazo zonke iimvavanyo. Ukufakelwa kobushushu kufakelwe kude kufezekiswe ubushushu obufunwayo.
Itafile # 2024 inokufudunyezwa kumaqondo obushushu achaziweyo angama-900-950 ° F kumgangatho we-1000ft / hr (305 m / hr). Intsimbi ye-# 2019 inokufudumeza ngombane ofanayo kunye nolungiselelo lwekhoyili kwisantya esisezantsi somgca oqikelelwa kwi-825 ft / hr (251m / hr).
Inkqubo enesiphumo esiphakamileyo sombane we-kW inokuhlangabezana neemfuno ze-1000ft / hr (305 m / hr) kumaxabiso aphezulu obushushu.
iindidi Teknoloji tags Ukufudumeza ucingo lwentsimbi, ukutshisa ukutshayela ucingo, intambo yokufudumeza yokufudumeza, ucingo olungenazintsimbi, Ukufudumeza ngecingo yesinyithi, I-wire yentsimbi engenashushu yentsimbi Post yokukhangela
Inkqubo yokungenisa i-wire heating process
Induction Hardening Insimbi yenxalenye yomatshini oMkhulu wokuLawula ukuHamba